/ iimveliso / abanye / USorafenib (284461-73-0)
Akukho kalo SKU: 284461-73-0. Udidi: abanye
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Sorafenib (CAS 284461-73-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Sorafenib powder isetyenziselwa ukuphatha i-renal cell carcinoma (RCC; uhlobo lomhlaza oqala kwiintso). I-Sorafenib isetyenziselwa ukuphatha i-hepatocellular carcinoma (uhlobo lomhlaza wesibindi) olungenakuphathwa ngonyango kunye nolunye uhlobo lomhlaza we-thyroid olusasaze kwezinye iindawo zomzimba kwaye awukwazi ukuphathwa nge-iodine ye-radioactive.
Sorafenib Abalinganiswa basisiseko
Ifomula yeMolekyuli: C21H16ClF3N4O3
Ubunzima Ezinto: 464.83
umbala: Ukukhanya okuKhanya okuKhanya
Ukusetyenziswa kweSorafenib (284461-73-0) kumjikelezo we-steroids
Sorafenib (284461-73-0), igama lezorhwebo yi-Nexavar.
1) Njengamacwecwe ngomlomo.
I-2) Kunconywa ukuba iipilisi zithathwa ngaphandle kokutya (ubuncinane ihora le-1 ngaphambi kweeyure ze-2 emva kokutya).
3) Imali ye-sorafenib eya kufumana iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Ugqirha wakho uya kugqiba i-dosage yakho kunye neshedyuli.
4) Iipilisi ezine-sorafenib tosylate (274 mg) elingana ne-200 mg yeSorafenib (i-CAS 284461-73-0).
Tshela ugqirha wakho ukuba ubona iingxaki zesikhumba (ezifana nokugqithisa, ukuhlambalaza, ubomvu, ukuvuvukala, intlungu), ngakumbi kwiintendelezo zezandla zakho okanye kwiintendelezo zeenyawo zakho ngelixa usebenzisa i-Nexavar.
Ulwaphulo olujoliswe kuko luyimiphumo malunga ne-100 yeminyaka yophando eyenzelwe ukuqonda umahluko phakathi kweeseli zomhlaza kunye neeseli eziqhelekileyo. Okwangoku, unyango lomhlaza lujolise ngokukodwa ekubulaleni ngokukhawuleza iiseli kuba enye yentsholongwane yeeseli ekwahlukana ngokukhawuleza. Ngelishwa, ezinye zeeseli zethu eziqhelekileyo ziyahlukana ngokukhawuleza, kubangele imiphumo emibi.
I-Sorafenib yenzelwe ukuvimba ukukhula kweseli se-tumor ngeendlela ezininzi. I-Sorafenib (i-284461-73-0) ijolise i-enzyme eziliqela kummandla wamaseli omhlaza, kunye neethagethi ngaphakathi kwiseli.Ukuphela kwezi thagethi zicingelwa ukuba zibandakanyeka kwi-angiogenesis (ukwenza imithwalo yegazi).
Indlela yokuthenga iSorafenib ukusuka kwi-AASraw